Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny lalao Football izay fantatra amin'ny anarana; "Ny New Thuram". Ny tantaran'ny Benjamin Pavard Childhood Plus ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny fotoan'ny fahazazany hatramin'izao. Ny famakafakana dia ahitana ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviany, ny fiainam-pifandraisana, ary ny zavatra hafa momba ny OFF-Pitch (kely fantany) momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny Fikambanam-behivavy 2018 World Cup sy ny fahaiza-manao amin'ny toerana fiarovana rehetra. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny Bio Bio Benjamin izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Voalohandohan'ny fiainana
Ny maherifo feno Frantsa, Benjamin Pavard dia teraka tamin'ny 28 March 1996 tao Maubeuge, Nord, Frantsa. Izy dia natsangana tamin'ny fanombohan'ny fanetren-tenany avy amin'ireo ray aman-dreniny tsara tarehy aseho eto ambany.
Ankoatra ny fanombohan'ny fanoloran-tena, ny dadan'i Pavard dia nametraka fototra ho an'ny asan'ny zanany malalany. Araka ny voalazan'i Benjamin Pavard;
'Ny namako akaiky indrindra dia nanaisotra ahy isan'andro ary izany no antony napetrako teo amin'ny vatako. Tsy nisy kilalao na lalao raha tanora aho, baolina kitra fotsiny. Feno fankasitrahana noho ny zavatra rehetra nataony aho. Nanosika ahy foana ny raiko. Raha tsy teo izy dia tsy hanana an'ity dia mampiadana ity aho hatramin'izao. '
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Relationship Life
Tsy isalasalana fa kintan'ny World Cup 2018 FIFA izy. Ny fahaiza-manaony sy ny fahaiza-manaon'ny Pavard, ary ny fomba fiainany eo an-tampony, dia manangana sary feno azy.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Rachel Legrain-Trapani sary etsy ambany dia ilay sipa avy amin'i Benjamin Pavard.
Taorian'ny nanakatonany ny fifandraisan'izy ireo tamin'ny fifandimbiasana dia namoaka ampahibemaso tamin'ny fampakaram-badiny tamin'ny May 2018 i Legrain-Trapani sy Pavard. Legrain- Trapani dia mpilalao tompon-daka erantany fahiny (Miss France, 2007).
Ankoatr'izay nibaribary ny fifandraisana teo anoloan'ny fiadiana ny amboara eran-tany 2018, i Rachel Legrain-Trapani dia nahasarika ny mason'izao tontolo izao izay nahafantatra fa izy no sipa nanoloana an'i Pérard nandritra ny fandresen'i 4-3 an'i Frantsa tamin'ny 16 farany tao Rosia 2018. Nijery azy mora foana izy rehefa nitraka teo amin'ny tongony.
Samy tia Manana fifandraisana miorina izay miorina amin'ny fisakaizana. Rachel dia fito taona latsaka noho ny lehilahy izay hita taratra amin'ny azy tsy misy endrika ivelany.
Na izany aza dia toa tsara tarehy izy araka ny nambara tao amin'ny sary etsy ambany. Ny lovan-kiran'i Legraina- Trapani dia mety ho antony nahatonga an'i Miss France 2007 handresy ary nahoana no nanjary tia azy i Benjamin Pavard.
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Momba ny sipany, Legrain-Trapani
Ny hatsaran-tarehy brunette, mpilalao matihanina iray, dia fantatra fa teo amin'ny fifandraisana sasantsasany, ary nanana zavatra ho an'ny kintan'ny fanatanjahan-tena. Avy amin'i 2007-2009, i Legrain-Trapani dia nampiseho ny fihetseham-pon'i Emmanuel Ladcé, manam-pahaizana manerantany.
Tao amin'ny 2013 dia nanambady an'i Aurélien Capoue, mpilalao baolina kitra FC Nantes, izy tamin'ny fampakaram-bady tao amin'ny Abbey Saint-Florent-le-Vieil.
Tao amin'ny 2016, ny mpivady dia nantsoina ny fotoam-panambadiany ary ny hatsaràn'ny 2007 Miss Frantsay dia niverina indray. Taorian'ny nanakanana ny fifandraisan'izy ireo teo ambany elany, Legrain-Trapani ary Nandeha an-kalamanjana ny Pavard miaraka amin'ny hirany tamin'ny May 2018.
Momba ny fakany: Rachel Legrain-Trapani dia zanakavavin'ny mpifindra monina italiana izay teraka tany Saint-Saulve tamin'ny volana 31, 1988. Nisaraka ny ray aman-drenin'i Rachel raha mbola zazavavy kely izy. Ny maman-dry zareo, Silvana izay mpitan-tsoratra dia nanangana an-dRahely tamin'ny tenany manontolo. Manan-janakalahy roa izy dia i Ruben sy i Melvin. Raha mijery ny sary eto ambany ianao, dia tsy azonao an-tsaina mihitsy hoe iza ilay reny sy zanaka vavy.
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Asa fanorenana
Tamin'ny taona 2002, rehefa taona 6 i Pavard, ny fitiavany ny baolina kitra dia nahita azy nisoratra anarana tao amin'ny lisitry ny ekipa tanora ao an-toerana, US Jeumont izay nanome azy ny sehatra hanehoana ny talentany.
Tamin'ny taona 10 dia nihevitra ny ray aman-dreniny nihevitra ny hamindra ny zanakalahin'izy ireo tao amin'ny akademia iray lehibe kokoa. Satria mbola tian'izy ireo ny zanak'izy ireo hanatrika sekoly ambaratonga iray tamin'io vanim-potoana io, dia nanomboka nitady sekoly ny ray aman-dreny roa, izay nahafahan'i Pavard nilalao baolina kitra. Ny sekoly ambaratonga fialantsasatra eo akaikin'ny lamesa baolina kitra ao Lille no safidin'ny ray aman-dreniny. Tsy maintsy nanatrika fitsapana tao amin'ny academy Lille i Pavard izay nandrosoany. Araka ny voalazan'i Benjamina izany;
Nandao ny tranoko haingana aho. Nandeha kilaometatra maro ny ray aman-dreniko mba hahita ahy. Tsy ho afaka hisaotra azy ireo mihitsy aho noho ny zavatra nataon'izy ireo ho ahy.
Raha tao Lille, ny fandresen'i Benjamin Pavard momba ny fandaharana dia tsy hoe faniratsirana fotsiny. Tamin'izany fotoana izany, dia nanana herim-po izy Ny fanapahan-kevitra izay nahatonga ny nofinofiny ho matihanina amin'ny ho avy, rehefa tapitra ny taonan'ny 10 tao amin'ny akademia.
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Career Summary
Taorian'ny nisehoan'i 25 ho an'i Lille nandritra ny fizaran-taona roa, dia nanomboka nahatsapa ny tsy fahampian'ny fahatokisana tamin'ny klioba i Pavard noho ny tsy fisian'ny baolina kitra voalohany. I Pavard dia nandao ny klioba mba hiaraka amin'i Stuttgart ao amin'ny 2016. Tany Alemaina dia nahatsiaro bebe kokoa i Pavard tao an-trano. Niteraka fahasambarana ho an'ny mamanay sy ny dadany izy (sary etsy ambany) raha nitarika ny ekipa Stuttgart izy handresy ny federasiona ao amin'ny 2016 / 17.
Nankafy ny fiainana tany Alemaina ny lehilahy frantsay, ka nahita ny fatokisany tsy hita tao Lille. Ao amin'ny teniny;
"Mifanaraka ny zava-drehetra. Manolotra betsaka ny tanàna, feno foana ny kianja, ary afaka mahatsapa ny fahatokisan'ny mpanazatra, ireo mpiara-miasa amiko ary ny birao aho, "
Talohan'ny fivoahan'ny Mondialy FIFA 2018 ao Rosia, ny fahaiza-manaon'i Pavard hifanaraka amin'ny lazany ho an'ny kliobany VfB Stuttgart dia nifanaraka tamin'ny fahafahany mitantana ny baolina. Rehefa nantsoina ho an'ny ekipa nasionaly frantsay voalohany voalohany tao amin'ny 2017 i Pavard, dia nisakafo antoandro taorian'ny kilasy teny alemà izy ary tsy nahatsikaritra fa tsy naheno antso maro avy amin'ny ray aman-dreniny izy.
Niantso ny ray aman-dreniny ny mpiaro ny Frantsay ary nitomany izy ireo rehefa nanolotra ny hafaliana ho azy. Tsy ela talohan'ny nidinany hizara ny fahasambarana tamin'ny mamanay sy ny dadany.
Ny sorona rehetra nataony hatramin'ny naha zazalahy azy tamin'ny farany dia nandoa ny fiadiana ny amboara eran-tany Russia 2018 FIFA. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Untold Biography Facts -Tatitra manokana
Benjamin Pavard no hany zanadin'ny ray aman-dreniny. Tsy manana rahalahy na anabavy izy. Ny fijerena akaiky ny fianakaviany dia mampiseho ny endriny tonga lafatra eo amin'i Pavard sy ny reniny.
I Pavard dia fantatra amin'ny volony volo sy ny fijery baolina fahiny. Izy no nanonona anarana hoe "Jeff Tuche"Avy amin'ny ekipa mpiara-miasa aminy france taorian'ny raim-pianakaviana malaza fitondra amin'ny horonan-tsarimihetsika frantsay"Les Tuches. "
Benjamin Pavard dia nieritreritra tanteraka ny asany amin'ny bobin'ilay mpanolo-tsainy, frantsa iraisam-pirenena taloha Lilian Thuram. Benjamin Pavard mandany fotoana betsaka amin'ny fianarany amin'ny mpanolo-tsainy
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Benjamin Pavard momba ny tantaram-pitiavana sy ny zava-misy marina momba ny zavakanto. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery tsara ato amin'ity lahatsoratra ity ianao, azafady azafady ny fanamarihanao na manontania anay !.
Tantaran'i Victor Osimhen Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Idrissa Gueye ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana mbola tsy fantatra
Thomas Muller tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa